Iiraan oo ka carootay go'aanka Maraykanka - iftineducation.com
iftineducation.com – Iran ayaa si caro leh uga jawaabtay go’aan ay maxkamadda sare ee Maraykanku ku xukuntay in ku dhawaad 2 bilyan oo doollar hanti ah oo Iran leedahay oo la xannibay la siiyo qoysaska ay eheladooda ku dhinteen iyo kuwii ka badbaaday qaraxyo lagu eedeynayo Iran.
Weerarrada ayaa qaarkood waxay ka kala dheceen Xarun Marineska ameerikaanku ku lahaayeen Beirut 1983 iyo Sacuudi Carabiya muddo laga joogo 20 sano.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran wuxuu sheegay in go’aankaas uu yahay xatoyo, uuna ka soo hor jeedo xeerarka caalamiga, waxayna arrintan imaanaysaa ayadoo maanta la filayo inay wasiirrada arrimaha dibadda ee Iran iyo maraykanku kulan ku yeeshaan New York, kaas oo ku saabsan qorshaha uu maraykanku xayiraadda kaga khafiifinayo Iran ee qaybta ka ah heshiiskii Nukliyeerka ee Iran.
Haddaba maxay tahay sababta ay xukun noocan ah maxkamad maraykanka ku taalla uga gaartay hanti ay Iran leedahay. Su’aashaas iyo qaar kale ayaan weydiiyey Dr. Sacad Sheekh Cismaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe